15 Nnipa bi fi Yudea bae,+ na wofii ase kyerɛkyerɛɛ anuanom no sɛ: “Sɛ wɔantwa mo twetia+ sɛnea Mose amanne no te+ a, muntumi nnya nkwa.” 2 Bere a akasakasa ne akyinnyegye a emu yɛ den kɔɔ so wɔ wɔne Paulo ne Barnaba ntam no, wɔyɛɛ nhyehyɛe sɛ Paulo ne Barnaba ne wɔn mu binom nkohu asomafo no ne mpanyimfo a wɔwɔ Yerusalem+ no wɔ akyinnyegye yi ho. 3 Afei bere a asafo no gyaa mmarima yi kwan kakra+ no, wɔkɔfaa Foinike ne Samaria kaa amanaman mufo no adwensakra ho asɛm pii kyerɛe,+ na ɛmaa anuanom no nyinaa ani gyei.+ 4 Bere a woduu Yerusalem no, asafo no ne asomafo no ne mpanyimfo no gyee wɔn fɛw so,+ na wɔkaa nneɛma bebree a Onyankopɔn nam wɔn so ayɛ no kyerɛɛ wɔn.+ 5 Nanso, ebinom a wofi Farisifo fekuw mu a wɔagye adi no sɔre fii wɔn nkongua so kae sɛ: “Ehia sɛ wotwa wɔn twetia+ na wɔhyɛ wɔn sɛ wonni Mose mmara no so.”+ 6 Na asomafo no ne mpanyimfo no hyiae sɛ wɔrebɛhwɛ asɛm yi aka.+ 7 Afei bere a akyinnyegye+ pii sɔree no, Petro sɔre ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mmarima, anuanom, munim pefee sɛ mfiase pɛɛ na Onyankopɔn hwɛɛ mo mu paw me sɛ amanaman mufo mfa m’anom asɛm so nte asɛmpa no na wonnye nni;+ 8 na Onyankopɔn a onim nea ɛwɔ komam+ no maa wɔn honhom kronkron de dii adanse,+ sɛnea ɔyɛ maa yɛn no. 9 Na wamma nsonsonoe biara anna yɛne wɔn ntam,+ na mmom ɔnam gyidi so tew wɔn koma ho.+ 10 Ɛnde afei, adɛn nti na mode kɔndua+ a yɛne yɛn agyanom antumi ansoa reto asuafo no kɔn so de asɔ Onyankopɔn ahwɛ?+ 11 Nanso yɛwɔ ahotoso sɛ yɛnam Awurade Yesu adom+ so benya nkwa te sɛ nnipa yi ara.”+ 12 Ɛnna nnipadɔm no nyinaa yɛɛ komm, na wofii ase tiee Barnaba ne Paulo ma wɔkaa nsɛnkyerɛnne ne anwonwade bebree a Onyankopɔn nam wɔn so yɛe wɔ amanaman mu no kyerɛɛ wɔn.+ 13 Wɔkasa wiei no, Yakobo buae sɛ: “Mmarima, anuanom, muntie me.+ 14 Simeon+ aka sɛnea Onyankopɔn dan n’ani baa amanaman no so nea edi kan yii nnipa bi fii wɔn mu maa ne din no ho asɛm fann.+ 15 Eyi ne Adiyifo no nsɛm hyia sɛnea wɔakyerɛw sɛ, 16 ‘Eyinom akyi no, mɛsan aba abesi Dawid sese a ahwe ase no; na mɛsan asi nea adwiriw agu no na mama so asi hɔ bio,+ 17 na ama nnipa a aka no ne amanaman mufo nyinaa, nnipa a me din da wɔn so no, ahwehwɛ Yehowa denneennen, Yehowa a ɔreyɛ nneɛma yi asɛm ni,+ 18 na wonim fi tete.’+ 19 Enti m’asɛm ne sɛ ɛnsɛ sɛ wɔhaw wɔn a wofi amanaman mu reba Onyankopɔn nkyɛn+ no, 20 na mmom wɔnkyerɛw nkɔma wɔn sɛ wɔntwe wɔn ho mfi nneɛma a abosom+ agu ho fĩ ne aguamammɔ+ ne mmoa a wɔakum wɔn a wɔanhwie wɔn mogya angu+ ne mogya+ ho. 21 Na efi tete mmere mu na Mose anya wɔn a wɔka ne ho asɛm wɔ nkurow nkurow so, efisɛ wɔkenkan ne nsɛm den wɔ hyia adan mu homeda biara.”+ 22 Afei asomafo no ne mpanyimfo no ne asafo mũ no nyinaa hui sɛ eye sɛ woyi wɔn mu bi ka Paulo ne Barnaba ho kɔ Antiokia; wɔne Yuda a wɔfrɛ no Barsaba+ ne Silas, mmarima a wɔyɛ atitiriw wɔ anuanom mu; 23 na wɔde wɔn nsa kyerɛwee sɛ: “Anuanom asomafo ne mpanyimfo no de kɔma anuanom a wɔwɔ Antiokia+ ne Siria ne Kilikia+ a wofi amanaman mu: Yekyia mo! 24 Esiane sɛ yɛate sɛ yɛn mu bi de nsɛm reteetee mo+ pɛ sɛ wɔsɛe mo adwene bere a yɛmmaa wɔn akwankyerɛ biara+ nti, 25 yɛayɛ adwenkoro+ na ɛyɛ yɛn anigye sɛ yɛbɛpaw mmarima aka yɛn adɔfo Barnaba ne Paulo+ ho aba mo nkyɛn, 26 mmarima a wɔayi wɔn kra asi hɔ ama yɛn Awurade Yesu Kristo din.+ 27 Enti yɛresoma Yuda ne Silas,+ sɛ wɔn nso mfa wɔn ano mmɛka asɛm koro no ara.+ 28 Na honhom kronkron+ no ne yɛn ankasa nso mpɛ sɛ yɛde adesoa+ foforo biara to mo so, gye eyinom a ehia yi, 29 sɛ montwe mo ho mfi nneɛma a wɔde abɔ afɔre ama abosom+ ne mogya+ ne mmoa a wɔakum wɔn a wɔanhwie wɔn mogya angu+ ne aguamammɔ+ ho. Sɛ motwe mo ho koraa fi eyinom ho+ a, ebesi mo yiye. Asomdwoe nka mo!” 30 Enti, bere a wogyaa mmarima yi kwan no, wɔkɔɔ Antiokia, na wɔfrɛɛ nnipa no boaa wɔn ano de krataa no maa wɔn.+ 31 Wɔkenkan wiei no, wodii ahurusi wɔ nkuranhyɛsɛm no ho.+ 32 Na esiane sɛ Yuda ne Silas ankasa nso yɛ adiyifo+ nti, wɔkaa nsɛm pii de hyɛɛ wɔn nkuran na wɔhyɛɛ wɔn den.+ 33 Enti, bere a wodii bere kakra no, anuanom gyaa wɔn kwan asomdwoe mu+ kɔɔ wɔn a wɔsomaa wɔn no nkyɛn. 34 —— 35 Nanso Paulo ne Barnaba kɔɔ so tenaa Antiokia,+ na wɔkyerɛkyerɛe na wɔkaa Yehowa asɛmpa+ no, na na afoforo pii nso ka wɔn ho. 36 Na nna bi akyi no, Paulo ka kyerɛɛ Barnaba sɛ: “Afei ma yɛnsan nkɔ anuanom nkyɛn wɔ kurow biara a yɛkaa Yehowa asɛm wom no mu nkɔhwɛ sɛnea wɔn ho te.”+ 37 Barnaba de, na wabɔ ne tirim sɛ ɔde Yohane a wɔfrɛ no Marko+ no bɛka wɔn ho. 38 Nanso Paulo susuwii sɛ esiane sɛ ogyaw wɔn hɔ wɔ Pamfilia+ na ɔne wɔn ankɔyɛ adwuma no nti, ɛnyɛ papa sɛ wɔde no bɛka wɔn ho. 39 Eyi de akasakasa a emu yɛ den bae ma wodii mpaapaemu; Barnaba+ faa Marko kaa ne ho na wɔfaa po so hyɛn de kɔɔ Kipro.+ 40 Paulo faa Silas,+ na bere a anuanom de no hyɛɛ Yehowa adom+ ase no, wofii hɔ kɔe. 41 Na ɔkɔfaa Siria ne Kilikia hyehyɛɛ asafo ahorow no den.+